Tag: kuvhota | Martech Zone
Pollfish: Maitiro ekununura epasirese online ongororo zvinobudirira kuburikidza nharembozha
Svondo, Kurume 5, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Ray Beharry
Iwe wagadzira iyo yakakwana mushambadziro yekutsvaga. Zvino, iwe uchagovera sei yako ongororo uye uwane huwandu hwakaenzana hwemhinduro nekukurumidza? 10% yepasirose $ 18.9 yepasirose yekutsvagisa musika yekushandisa inoshandiswa pazviongororwa zvepamhepo muUS Wakaunganidzira pamusoro peiyi nguva kupfuura zvawanga uchienda kumushini wekofi. Iwe wagadzira mibvunzo yekuongorora, wakagadzira musanganiswa wega wega wemhinduro- kunyange wakakwanisa kurongeka kwemibvunzo. Wobva waongorora ongororo iyi, ndokuchinja